मेरो विजयको आधार भनेको यहाँका मतदाता नै हो :फकरुद्दिन खाँ-Nagarikaawaj.com
फकरुद्दिन खाँ , कांग्रेस,रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख का उम्मेदवार
१) तपाईको विकास एजेण्डा के हो ?
मेरो विकास एजेण्डा भनेको समग्र यस क्षेत्रका जनताको बाटो, स्वास्थ्य चौकी, स्कुल र सञ्चारमा पहुँच पुगोस् भन्ने हो । हाम्रो क्षेत्रमा अझै विकास भएको छैन ।
जनताले विकासका लागि तडपिरहेका छन । राज्यले नै मधेश क्षेत्रमा विकासमा विभेद गरेको छ । त्यसकारण पनि मधेशको विकास पहिले हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि मेरो प्रयत्न भनेको विकास नै हो र एजेण्डा भनेको नै मधेश क्षेत्रको विकास हुनुपर्दछ भन्ने हो ।
२) तपाई संघीय समाजवादी फोरम परित्याग गरेर कांग्रेसमा आएर उम्मेदवार नै बन्नुभयो, किन ?
संघीय समाजवादी फोरममा वसीराख्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण देखिन । नेपाली कांग्रेस मधेशकै हितका लागि काम गरिरहेको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसले पनि त मधेशका एजेण्डा बोकेर हिडेको छ ।
बरु मधेश आन्दोलनका क्रममा त्यत्रा मानिस शहिद भए । तर खोइ त ती मानिसका परिवारले न्याय पाएको ? त्यसकारण भन्ने एउटा र गर्ने एउटा भएको कारण म फोरम परित्याग गरेको हो ।
वास्तवमा अव राजनैतिक मुद्दा समाप्त हुनेक्रममा छ । मधेशका अधिकार पनि सुनिश्चित हुने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले संसदवाटै मधेशका माग सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको हो । त्यसकारण मधेशका नाममा मधेशवादी पार्टीमै बसिरहनु पर्ने देखिन र फोरम त्याग गरेँ ।
३) मधेशका जनताले फोरम त्याग गरेको मन पराएका छैनन नि ?
मधेशका ठूला ठूला मानिसले मलाई बधाई दिए र शुभकामना पनि दिएका छन । वास्तवमा कुनै एक जात र धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेका छन ।
पहिला फोरममा बसेर काम गरेकै हो तर मधेशका जनताको खोइ त अधिकारको कुरा ? फोरमले त्यो काम गर्नै सकेन । बरु नेपाली कांग्रेसले मधेशको मुद्दामा आफ्नो अडान कायम रहेको देखियो । जनताले त्यो कुरा विस्तारै बुझ्दै गएका छन । अहिले चुनावको दौरानमा त्यो कुरा पनि उठेको हो र जनताले विस्तारै बुझेर मेरो उम्मेदवारीलाई अहिले स्वागत गरेका छन ।
४) तपाईको विजय हुने आधार के हो ?
मेरो विजयको आधार भनेको यहाँका मतदाता नै हो । दक्षिण क्षेत्रवाट नेपाली कांग्रेसले १० हजार बढी भोट ल्याएर नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार शाहलाई पठाउनेछ । नेपाली कांग्रेसको जीत सुनिश्चित भैसकेको छ । त्यो यहाँका जनताले नै भनिसकेका छन । लुम्विनी क्षेत्रको विकास गर्नुपनि जरुरी छ ।
विजयी भएपछि मैले लुम्विनीको नयाँ रुपमा विकास गर्ने भनेको छु । लुम्विनीको विकास गर्ने मसंग भिजन छ । त्यो भिजन लुम्विनीमा लागू गर्ने हो । जनताले त्यो कुरा भनेका छन । त्यसकारण जनता मसंगै छन । मेरो विजय हुने आधार यो पनि हो भन्ने लाग्दछ ।
रविले धन्यबादसभामा भने-‘आवाज विहीनहरुको आवाज ‘सीधाकुरा जनतासंग’ झन् बलियाे बन्छ’